Uwe ejiji - oge, okpomọkụ, roba, mmiri-oge, egwuregwu, na-enweghị ikiri ụkwụ, na ụkwụ zuru oke, n'elu ikpo okwu, wedge, obere ntụpọ, osimiri, kwa ụbọchị
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ anụ - usoro kachasị mma nke mmiri iyi ụmụ nwanyị, okpomọkụ, ụbịa na oyi akpụkpọ ụkwụ
N'okpuru akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị, akpụkpọ ụkwụ na-abụkarị ihe dị oké mkpa. Agba akpụ mara mma ma mara mma na-agbanwe onye nwe ya kpamkpam, mee ka ọ dị ogologo, slimmer na slimmer, gosikwa na nkà na-agba ya gburugburu nke nwa agbọghọ ahụ ka ọ mara ejiji ma họrọ ihe ndị dị mma nke onyinyo ahụ.
Akpụkpọ ụkwụ 2018 - ejiji ejiji
Na mmalite nke oge ejiji ọhụrụ, ihe ndị dị ugbu a na-akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ. Ka o sina dị, ngwaahịa ndị oge gboo na-anọgide na-abụkarị nke ewu ewu, n'agbanyeghị ntụziaka nke ndị mmepụta na stylists na-atụgharị. Ya mere, ihe kachasị dịgasị iche iche, nke kachasị mma maka ihe niile eji eji akwa uwe, bụ ụgbọ mmiri akpụkpọ anụ.
Ugboro chaa chaa chaa chaa chaa chaa chaa chaa na 2018 na-anọchite anya ọ bụghị naanị site na ụgbọ mmiri ndị ọzọ, kamakwa site na ụdị ndị ọzọ. Ya mere, n'oge a, a na-emechi akpụkpọ ụkwụ na-ekpuchi akpụkpọ ụkwụ, n'ile anya dị ka ụmụ mmadụ, ìhè na ntụsara ahụ dị mma - na akpụkpọ ụkwụ, nhọrọ dị iche iche na ikiri ụkwụ na ọdịdị efu na ọtụtụ ihe.
Na nkeji oge, ụdị akpụkpọ ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ niile n'elu ikpo okwu , mkpịsị ụkwụ ma ọ bụ ikiri ụkwụ ga-abịa n'ihu. Na oge oyi, ụmụ agbọghọ ga - enwe nhọrọ dịgasị iche iche - uggs dị ọkụ ma dị mma nke ụdị dị iche iche na agba, nwanyị na - eche akpụkpọ ụkwụ na ejiji ma ọ bụ ụdị nke rhinestones, akpụkpọ ụkwụ nke ihe dị iche iche, nke a na - eji mma na -
Akara agba nke oge-oge agba 2018
Na oge na-abịanụ, akpụkpọ ụkwụ maka oge mgbụsị akwụkwọ na ọnwa mmiri ga-abụ ọdịiche dịgasị iche iche. N'okwu niile a na-ekwu, nwanyị ọ bụla nke ejiji nwere ike ịhọrọ nhọrọ dị mma, dịka ọmụmaatụ:
agba akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị 2018 na -emepụta ụdị anụmanụ ma na-eṅomi akpụkpọ anụ dị iche iche ga-abụ ezigbo ihe. Uwe akpụkpọ ụkwụ, akpụ ụkwụ ụkwụ, akpụkpọ ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ, nke nwere ụdị mmemme dị otú ahụ, ga-adaba ma ọrụ ma maka ịgagharị n'oge oyi;
botilony mara mma nke bu akwukwo ogbo bu ihe omuma nke oge;
akpụkpọ ụkwụ n'elu ikiri ụkwụ na ikpo okwu na-adịghị njọ, Otú ọ dị, ọ na-adọta ụmụ agbọghọ na ụmụ nwanyị na mma ya;
nhọrọ maka traktọ naanị ga-anọgide na-aba uru. N'ihi ya, ndị dị otú ahụ nwere ike ịbụ ma na-arịa ọrịa dị ala, na ikiri ụkwụ.
Ejiji akpụkpọ ụkwụ - okpomọkụ 2018
N'abalị nke oge okpomọkụ, ndị na-emepụta ihe na ndị na-emepụta ihe na-arụ ọrụ na-ama aka, na-enye ndị inyom nwere ụdị dị iche iche nke ụdị, ụdị na agba. N'otu oge ahụ, ụfọdụ ngwaahịa afọ a na-ele anya nke ọma, dịka e kere ha na-adabere na-adọrọ mmasị na-egosipụta ụdị. Atụla egwu nke a - ejiji akpụkpọ ụkwụ ndị dị mkpa na mbụ, na-abịa mgbe nile, na-ewetara ha ihe ọhụrụ, nke na-egbuke egbuke na nke mbụ.
Akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị na-ewu ewu, okpomọkụ 2018, na-anọchite anya ya site na nhọrọ ndị a:
na-enwu enwu, nke afọ a na-ekwe omume ọ bụghị naanị na ọnọdụ nke ndị ọzọ ma ọ bụ ihe dị nsọ, kamakwa na-adị kwa ụbọchị. Dolce & Gabbana, Christian Dior, Gucci, Calvin Klein na ụdị ndị ọzọ dị na nchịkọta ọhụụ ha wetara akpụkpọ ụkwụ mara mma nke eji egbuke egbuke ma ọ bụ chọọ mma na rhinestones ma ọ bụ ewute;
na oge na-ekpo ọkụ, ihe ndị mara mma nke na-esepụta floral na-ebute ụzọ. Na 2018 akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ anụ na-ebipụta ma ọ bụ applique na-egosipụta na nchịkọta nke Alexander McQueen, D & G, Alice + Olivia, na na;
megide nzụlite nke ịnụ ọkụ n'obi nke ụwa maka ụdị ọkpụkpọ azụ ahụ ga-abụ akpụkpọ ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ kachasị ewu ewu na mkpịsị ụkwụ n'ogologo ma ọ bụ square;
na 2018, mgbe ha na-ewu ewu, ha weghaara akpụkpọ ụkwụ ejiji na mkpịsị aka. Ụdị ụdị ndị a pụtara na nchịkọta nke Prada, Valentino, Tom Ford, Gucci na ndị ọzọ na-emepụta ihe ngosi;
Na mgbakwunye, afọ a, ndị stylists nwere nnọọ obi ụtọ na ha hụrụ akpụkpọ ụkwụ dị ala ma dị mma - ọzọ ejiji akpụkpọ ụkwụ na-apụta na akpụkpọ ụkwụ, ihe dị ka sentimita atọ n'ogologo.
Akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ maka ụmụ nwanyị
Na oge ọ bụla, ọnọdụ ndị ahụ na-agbanwewanye nke ukwuu, yabụ ụmụ agbọghọ ndị chọrọ ịnọgide na-emekarị, ọ dị gị mkpa iji nlezianya nyochaa ha. Ọ bụrụ na ejiji ejiji n'ụgbọ a bụ ihe kachasị mfe, nke dị jụụ na nke dị jụụ, afọ ole na ole gara aga, ndị na-emepụta ihe na ndị na-emepụta ihe na-elebara ya anya, ya mere ngwaahịa ndị nwere ike ịkpata nsogbu.
Ka ọ dị ugbu a, nke a apụtaghị na akpụkpọ ụkwụ ejiji nke 2018 anaghị egbuke egbuke, dị irè ma gosipụta ya. N'ụzọ dị iche, n'etiti nhọrọ dịgasị iche iche a na-ewu ewu, nwanyị ọ bụla nwere ike ịhọrọ nke ọ ga-enwe obi ike na nke dị jụụ, ma lee anya - nwanyị na ịma mma.
Ụcha akpụkpọ ụkwụ kachasị mma maka ụmụ nwanyị mara mma na-enwekarị ikiri ụkwụ, bụ nke na-eme ka nwanyị gbanwee, ụkwụ ya na-adịkwu ogologo ma na-egbuke egbuke, ọkpụkpụ na ọkpụkpụ na-abụkwa nwanyị na-adọrọ adọrọ. Ka ọ dịgodị, nnukwu ikiri ụkwụ adịghị adaba mgbe niile. Ya mere, ihe dị nro, nke a na-ahụkarị na ememe na ntụrụndụ, na ndụ kwa ụbọchị na-emekarị ka ọ na-eme ka ikiri ụkwụ dị elu.
Na mgbakwunye, ọ bụghị oge mbido n'elu ewu ewu bụ akpụkpọ ụkwụ ejiji na akara ụkwụ nke ọtụtụ ụdị na nha. Ndị na-edepụta ihe na ndị na-emepụta ihe emepụtawo ụdị ụkwụ na ikiri ụkwụ n'ụdị violin, iko, obi na ọtụtụ ndị ọzọ. Taa, ụdị akpụkpọ ụkwụ niile na - akpụ ụkwụ - akpụkpọ ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ, akpụkpọ ụkwụ na akpụ ụkwụ ụkwụ, akpụkpọ ụkwụ na ọbụna sneakers.
Ụdị akpụkpọ ụkwụ na-enweghị ikiri ụkwụ
Ndị na-akwado nkasi obi na nkasi obi ga-achọ akpụkpọ ụkwụ ejiji na akwa akwa, nke ị nwere ike ịnọ ma ọ dịkarịa ala ụbọchị dum. Ihe ndị dị otú a dị mma maka ịmepụta ihe ọ bụla kwa ụbọchị, ihe ngosi egwuregwu ma ọ bụ ihe nkiri ịhụnanya, Otú ọ dị, ọ dị obere na ihe dị egwu. A na - emepụta akpụkpọ ụkwụ ọ bụla dị iche iche - ndị sneakers na sneakers, snickers na slip-ons .
Afọ ole na ole gara aga, na Olympus ejiji, akpụkpọ ụkwụ ịnyịnya ibu dị ịrịba ama na-egosi na ọ na-emeghe ikiri ụkwụ na agbachi agbachi. Ọ bụ ezie na ụdị ndị ahụ dị na nchịkọta nke Gucci na Miu Miu, taa, ha na-enye ha na ụdị nke ụdị ndị a ma ama. N'ịbụ onye nwere nkasi obi dị egwu na ọdịdị dị mma nke akpụkpọ ụkwụ a, ụfọdụ ụmụ agbọghọ na-anọgide na-eje ije n'ime ya ọbụna n'ụlọ, na-anọgide na-enwe mmekọahụ na-adọrọ adọrọ.
Ejiji nke oge a na-enye ndị inyom ejiji na ụdị akpụkpọ ụkwụ ndị ọzọ na-agba ọsọ - akpụkpọ ụkwụ-chelsea, ndị na-egbukepụ egbukepụ na ndị mbụ, ndị moccasins, oxfords, brags na ọtụtụ ndị ọzọ. N'oge okpomọkụ, a na-enwe obi ụtọ nke ndị na-enwe mmekọahụ na-adọrọ mmasị site na slippers na-edozi ahụ, ma ọ bụ ndị nkịtị na-akpụ akpụ, na ihe ndị dị egwu na-egbuke egbuke.
Akpụkpọ ụkwụ a na-eyi akwa n'elu ikpo okwu
Ngwaahịa n'elu ikpo okwu na-enye miniature fashionistas ohere iji dị ogologo. N'ọtụtụ ọnọdụ, ha na-ahọrọ site na ụmụ agbọghọ na-eto eto, bụ ndị ihere na-eme ihere. N'okwu a, n'adịghị ka akpụkpọ ụkwụ na ikiri ụkwụ, ụdị ndị dị n'elu ikpo okwu adịghị eme ka ahụ ghara iru ala ma ghara ime ka nwa agbọghọ ahụ gbanwee. Nke a na-agụnye ọ bụghị naanị akwa akpụkpọ ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ, kamakwa akpụkpọ ụkwụ oyi na-agba agba na mbara ikuku nke ọ bụghị naanị na-enwekwu mmụba, kama ọ na-enyekwa nduzi a pụrụ ịdabere na ya na mbara igwe.
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na osisi pịrị ọnụ
Mbelata bụ ụzọ dị mma na ikiri ụkwụ. Akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị na-emepụta nke ọma na nke a anaghị eme ka ahụ erughị ala n'oge sọks ma n'otu oge ahụ anya na-agbatị ụkwụ ha ma mee ka ha jiri nwayọọ nwayọọ slimmer. Azụ ahịa akpụkpọ ụkwụ, akpụkpọ ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ na-ahọrọ ndị nwanyị na-azụ ahịa, ọ dị ha mkpa inweta nkasi obi na obi ike onwe ha na igosi ndị ọzọ nkwenye na ịdị mma. Tụkwasị na nke ahụ, n'oge ahụ, a na-emepụta akpụkpọ ụkwụ ndị na-eto eto dị otú ahụ na obere osisi, dịka ndị nkedo ma ọ bụ sneakers, ihe ndị a dị mma ma jikọtara ya na ngwa egwuregwu na ihe eji eme ihe.
Uwe ejiji egwuregwu ụmụ nwanyị na-enye obi ụtọ na ejiji kwesịrị ịdị na uwe akwa nwanyị ọ bụla mara mma. Ndị inyom ejiji ejiji eji ya eme ihe ọ bụghị nanị maka egwuregwu na ntụrụndụ na-emegharị ahụ, kamakwa maka ịgba ụta na ịzụ ahịa kwa ụbọchị. Ngwaahịa nke usoro egwuregwu ahụ na-ejikarị ejide onwe ya na-egbu egbu ma na-ejighị ihe ndozi dochie ya. Na mgbakwunye, sneakers, sneakers na ụdị ndị ọzọ na-ejikarị elu dị elu, ya mere ụkwụ na ha adịghị ada mbà.
Akpụkpọ ụkwụ rubber
N'oge na-adịbeghị anya, akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ anụ maka ndị inyom, nke na-echebe nchebe mmiri na mmiri dị na mmiri, na-ewu ewu n'etiti ndị inyom mara mma. Nke a na ụdị dịgasị iche iche nke akpụkpọ ụkwụ, gụnyere ihe dị iche iche na obere ntụpọ, mkpịsị ụkwụ ma ọ bụ ikiri ụkwụ, na akpụkpọ ụkwụ dị mma, na akpụkpọ ụkwụ emechi. Ndị na-emepụta oge a na ndị na-emepụta ihe emeela ọbụna akpụkpọ ụkwụ , sneakers na siphon kpamkpam nke roba - ụdị ndị a nile dị nnọọ iche ma bụrụ maka oge okpomọkụ n'oge okpomọkụ.
Ụsọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ
N'oge ọkọchị, akpụkpọ ụkwụ maka osimiri na-aghọ ndị a ma ama, dị ka ọtụtụ ụmụ agbọghọ na-aga ezumike n'oké osimiri, oké osimiri ma ọ bụ ọdọ mmiri. A na-eji akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ maka ụmụ nwanyị na-etinye oge n'osimiri mmiri dị iche iche:
ụdị akpụkpọ ụkwụ na slippers niile;
Vietnamese - ụdị nke nwere mkpịsị aka n'etiti mkpịsị aka;
Dianetics - ngwaahịa na mgbanaka gburugburu mkpịsị aka;
ncha - PVC slippers na perforations;
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na ụkwụ zuru
Ụmụ agbọghọ ndị nwere ukwu ụkwụ zuru oke nwere ike ọ gaghị adị mfe ịchọta nhọrọ kwesịrị ekwesị nke ha ga-adị mma ma dị mma n'ụbọchị. Ka ọ dịgodị, ndị na-emepụta ihe na ndị na-emepụta kwa afọ na-etolite ọtụtụ ụdị maka ndị inyom nwere ụdị ọnụ. Ya mere, akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ kwa ụbọchị maka ụmụ nwanyị nwere ụkwụ zuru oke na-anọchite anya ọdịiche ndị a:
Akpụkpọ ụkwụ nwere ogologo ụkwụ dị elu nke 5-7 sentimita na imi imi;
ụlọ na-acha ọcha ballet n'ikiri ụkwụ;
akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ, na akwa akpụkpọ anụ;
ụdị ndị buru ibu n'ihu - nkọwa a na-adọpụ uche site na nkwonkwo ukwu;
akpụkpọ ụkwụ na nkwonkwo ụkwụ ụkwụ na nnukwu bootleg.
Akpụkpọ ụkwụ mara mma maka ndị agadi
Na ndị agadi nwanyị chọrọ akpụkpọ ụkwụ ejiji ejiji akpụkpọ anụ, nke kachasị na oji na aja aja. Maka ụmụ nwanyị mara mma na afọ a kachasị mma maka akpụkpọ ụkwụ-ụgbọ mmiri nwere nnukwu ikiri ụkwụ dị ihe dị ka sentimita 5, maka oge oyi nke afọ - akpụkpọ ụkwụ dị ọkụ nke dị n'etiti etiti roe, nakwa maka akpụkpọ ụkwụ dị ọkụ - akpụkpọ ụkwụ mechiri emechi ma ọ bụ obere akpụkpọ ụkwụ na-enweghị isi ihe ndozi.
Ndị eji ejiji ndị Italian
Kedu ihe ị ga-eyi uwe-acha anụnụ anụnụ?
Oge ezinyere ezinụlọ na okike
Ụkwụ kachasị ogologo n'ụwa - onye nwe ya?
Ntucha nke pink
Kedu otu esi eji akwa akwa uwe?
Kedu ụdị akpụkpọ ụkwụ ị ga-eyi uwe?
Onwunye di na nwunye n'okporo ámá
Ọnọdụ maka oge ịse foto na enyi nwanyị
Ebe "Forest Nymph"
Ngwa maka agbamakwụkwọ
Kedu ka esi esi khinkali nri?
Mgbu na ikpu
Egwuregwu ọ bụla maka ndị inyom dị ime
Fibromyoma nke akpanwa - ọgwụgwọ
Mmiri Artesian dị mma na ihe ọjọọ
Kedu otu esi ahọrọ onye na-ekpo ọkụ infrared?
Ngwurugwu maka efere n'ime ime ụlọ ahụ
Ntak emi ikemeke ndinam ke 6?
Sandwiches na microwave - ntụziaka dị mfe na ngwa ngwa maka nri
Kedu otu esi eme nutlet na ulo?
Funchoza na ọkụkọ na akwụkwọ nri - Ezi ntụziaka nke Asia piquant
Njem na Panama
Grandma na cat bụ ndị kasị mma emetụ ndị enyi
Keira Knightley "chụpụrụ" ụlọ ya n'etiti New York maka $ 6 nde
Mononucleosis - ụdị ọrịa?
Ezigbo okooko osisi ime ụlọ
Akụkọ iri abuo abuo a ma ama nke ihe oma furu